सिन्डिकेट माथि सरकार हावी, सेवा अवरुद्ध गरेका समितिका काउन्टर बसपार्कबाट हटाइयो ! – मुलधार न्युज
Home > राजनीति > सिन्डिकेट माथि सरकार हावी, सेवा अवरुद्ध गरेका समितिका काउन्टर बसपार्कबाट हटाइयो !
२१ बैशाख २०७५, शुक्रबार २३:४६
२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेटको पक्षमा लागेर सेवा अवरुद्ध गरेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर नयाँ बसपार्कबाट हटाएको छ । १४ वर्षदेखि बसपार्कमा भाडा नतिरी एकतर्फी रुपमा कब्जा जमाएर बसेका समितिका काउन्टर साँझ कडा सुरक्षा व्यवस्थाकाबीच हटाइएको हो ।
सरकारको निर्देशन अनुरुप बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले साँझ तीन दर्जन समितिका काउन्टररु हटाएको छ । लोत्सेका महाप्रवन्धक सुनिल कुँवरले अब कम्पनीका काउन्टरहरु व्यवस्थित रुपमा राख्ने बताए ।
भाडा नतिर्ने र व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रको व्यवस्थापक कम्पनी लोत्सेलाई पनि व्यवसायीहरुले सहयोग गरिरहेका थिएनन् ।
‘अब बसपार्क भद्रगोल हुँदैन । यहाँ सिस्टम बनाउँछौं,’ कुवँरले भने,’बसपार्कभित्र यात्रु ठगिने र लुटिने अवस्था अत्त्य गर्न सरकारको सहयोग माग्छौं । हामी पनि सक्दो प्रयास गर्छौं ।’
सरकारले दिएको निर्देशनअनुरुप अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरुको काउन्टर बसपार्कबाट हटाएको उनले स्पष्ट गरे । अब बसपार्कभित्र कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राखिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।